Lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina : nivadika sakoroka ny fizarana vary… | NewsMada
Lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina : nivadika sakoroka ny fizarana vary…
Par Taratra sur 15/05/2018
Nivadika ho sakoroka sy fifanjevoana ny lanonana fizaran-javatra maimaimpoana, toy ny vary, menaka… nakan’ny fitondrana ny fon’ny olona, nandritra ny fanamarihana ny herinandron’ny fahasalaman’ny reny sy ny zaza, tetsy amin’ny Lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina, omaly tolakandro.
Nilamina ny tapany maraina ny lanonana nanamarihana ny fanombohan’ny Herinandron’ny fahasalaman’ny Reny sy ny zaza izay mifanindran-dalana amin’ny Herinandro afrikanina ho an’ny vaksiny 2018, omaly teny amin’ny Palais de sport Mahamasina. Lanonana narahina fizaran-javatra maimaimpoana toy ny vary sy menaka izany.
Niafara tamin’ny fifandonana anefa izany ny tolakandro tokony ho tamin’ny 2 ora teo, rehefa vita ny lanonana fizarana moto sy jiro mandeha amin’ny herin’ny masoandro ho an’ireo mpanao vaksiny mitety vohitra. Rehefa lasa ireo tompon’andraiki-panjakana, nifarombaka amin’izay ireo olona teny an-toerana.
“Natahotra ny tsy hahazo angamba, tsy nisy nanaiky fandaminana intsony ka nisy ireo nibata vary tamin’ny gony mihitsy. Nahita izany ny sasany ka nifarombaka ihany koa, ary nibata seza ny hafa ary nifampively teo”, hoy ny fanazavan’ny nahita maso ity toe-javatra ity. Nilaza ny olona nahita maso hafa nilaza fa nisy nianjera avy eny amin’ny “gradin” ireo mpifarombaka vary. Nisy mihitsy ny naratra tamin’izany, ary nifamonjena ny fitondrana azy niala teo an-toerana.
Ny avy amin’ny mpitandro filaminana nilaza fa nisy tokoa ity fifarombahana ity, ary nahita ny fisiana andian’olona nibata vary tamin’ny gony izy ireo. Nisy ny fandaminana ireo olona tao an-toerana tamin’izany, ary niverina tamin’ny laoniny ny filaminana tamin’ny 3 ora tolakandro tany ho any. Nanazava ny mpitandro filaminana fa tsy mbola nahazo tatitra momba ny olona naratra, na mety ho zavatra very izy ireo, omaly hariva.
Ireo vary sy savony sy kojakoja hafa, natokana nozaraina amin’ny fokontany 192. Ny avy amin’ny fokontany indray no mandamina izay olona tokony mahazo izany avy any aminy. Tsy fantatra intsony anefa, omaly, raha ireo olona notsongaina avy amin’ny fokontany ihany ireo nifarombaka ireo na nisy olona ivelany.
Tazana vao maraina teny anoloan’ny lapan’ny Antenimierandoholona ny andian’olona nilanja sora-baventy niandry ny fandalovan’ny filoham-pirenena mivady ka asa raha mety hisy hifandraisany izany. Ireto olona ireto izay voalaza fa mpomba ny fitondrana.
Endriky ny krizy
Maneho hatrany ny tranga toy izao fa tena anaty krizy sy fahantrana lalina ny olona. Mifarombaka, miady, mangalatra, manararaotra izay mba hahazoana kely ka na hanaraka hatramin’ny aina aza, atao ihany. Endrika mampiseho ihany koa fa toe-javatra kely fotsiny, mety hahatonga korontana mahatsiravina eto amin’ny firenena. Resaka politika daholo ny mahatonga izany. Tompon’andraikitra ny mpanao politika kanefa tompon’andraikitra voalohany ihany koa ny mpitondra fanjakana. Anisany mahatonga ny krizy eto amin’ny firenena izy. Tsy manana vahaolana maharitra, mifanaraka amin’ny zava-mitranga. Raharaha vonjy tavan’andro hatrany ny iainan’ny Malagasy ka tsy mahagaga raha miaina anaty krizy hatrany ny firenena.